I-China Purity Graphite Powder enomGangatho oPhezulu oPhezulu woQeqeshiso lokuSebenza kunye noMthengisi | URubang
Ucoceko lweGrafite Powder eneNdlela yokuGqibela yokuHanjiswa kweThermal ephezulu
Impahla eluhlaza: Umsizi we-graphite electrode
Yesicelo: Refractory, Ivoti, Foundry
Indlela yeMveliso: Ukuxutywa, ukungcangcazela, ukubunjwa, Isostatic
S: 0.05% Ubukhulu. U-Ash 0.5% uMax.
Grafayithi I-Flake Powder-yePhysical Index kunye neMichiza Index
Ukucaciswa (Mesh): 32/50/80/100/200/300/500/1000/1200
I-Black Flake okanye i-wder
Inqanaba lomgangatho orous
Phawula: I-Ash zizalathiso zeparameter.
Imveliso ye-Amorphous Graphite Powder yenziwa kumgangatho ophezulu we-ash ash petroleum coke njengezinto ezingafunekiyo, ezenziwa kubushushu obuphezulu ngaphezulu kwe-2800 ° C unyango lobushushu. Inomxholo wekhabhoni ophezulu, ubunzima obuphantsi, ukumelana nobushushu obuphezulu, i-porosity enkulu, ukuqhuba kwe-thermal esezantsi, ukuphucula ukubambelela, umlinganiso ozinzileyo wokungqubana.
2) I-Graphite yendalo yePowder Powder:
Imveliso yePowder Graphite Powder ineepropathi zomgangatho ophezulu we-crystalline flake graphite, ukumelana ne-oxidation kubushushu obuphezulu, ukuzithambisa kunye neplastikhi;
kunye nokuqhutywa kombane okuhle, ipropathi yobushushu be-electro kunye nokubambelela. Isicelo: sisetyenziswa njengesithambisi esonakalisayo-ukuveliswa kwe-catalyst kwimizi-mveliso yesichumiso semichiza;
Ubungakanani besitokhwe esineqondo lobushushu eliphezulu kunye nesiseko sesithambiso sokuthambisa; I-powder yokukhutshwa kwe-metallurgy kunye ne-alloying ye-additive; Iarhente yokugcwalisa okanye iarhente yokuphucula irabha, iplastiki kunye nokudityaniswa.
3) Powder Grafayithi Powder:
Imveliso yePowulite Powder eyandisiweyo inokucaciswa ngokugqwesileyo kunye nobushushu obuphezulu, ukumelana nobushushu, ukuthambisa kunye nozinzo lweekhemikhali.
Yesicelo: Izinto zokwambathisa obushushu kwisongezo kumzi mveliso we-metallurgical; Imathiriyeli ekrwada yePhepha leFlexible Graphite; Izinto eziFunwayo zeBhetri; Lubricant additive; Ukucima iArhente eyongezelelweyo.
Esitalini, crystallization ngokupheleleyo, ubulukhuni elungileyo, ukuxhathisa ngamandla ukungqubana, Ultrafine conductive, Thermal ukumelana Shock, Iimpawu ukumelana lobushushu eliphezulu, yokugquma eshushu, ukuthambisa ajikeleze kunye nozinzo imichiza.
(1) njengesongezelelo kumzi mveliso we-metallurgical.
(2) njengoko izinto grafayithi bhetyebhetye.
(3) njengezinto ezifunxa ibhetri.
(4) esetyenziselwa ukudibanisa igrisi.
(5) isetyenziselwa ukudibanisa into enqabileyo.
Iingxowa zetoni okanye i-10/20 / 25kg kwii-1MT iiNgxowa eziKhulu, okanye iiNgxowa zejumbo eziManzi.
Egqithileyo Ukucoceka kweGrafayithi i-Electrode ye-Electrode Cola kwixabiso loKhuphiswano
Okulandelayo: Iibhloko zeGrafite zango-1940 zeBakala